काठमाडौं । कोरोना विपद्का बीच पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७्७८ को दोस्रो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको औसत नाफा २८ प्रतिशतले बढेको छ । २० निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
पुस मसान्तसम्म १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रू. २ अर्ब ८ करोड १४ लाख खुद नाफा कमाएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले रू. १ अर्ब ६२ करोड खुद नाफा कमाएका थिए । समीक्षा अवधिमा यी कम्पनीहरूको कुल बीमाशुल्क संकलन भने १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भारतीय स्वामित्वका दि ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सले भने अझै यस्तो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बीमा कम्पनीहरूले टेक्निकल रिजर्भ (लगानीयोग्य रकमको योगफल) को २० प्रतिशतसम्मको रकम शेयरबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाली शेयरबजार बुलिश ट्रेन्ड (बढ्दो क्रम) मा छ । त्यस अवस्थामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शेयर कारोबारको नाफा बुक गर्दा कम्पनीको नाफा पनि बढेको हो ।
नाफा कमाउने मामलामा यसपटक नेको इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले यस अवधिमा रू. २६ करोड ४० लाख नाफा कमाएको छ । यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको शिखर इस्योरेन्स भने यसपटक दोस्रो स्थानमा आएको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त कम्पनीले रू. २४ करोड १४ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।
नाफा कमाउने मामलामा प्रिमियर इन्स्योरेन्स तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उक्त कम्पनीले पुससम्म रू. १८ करोड ६९ लाख खुद नाफा कमाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा १० निर्जीवन बीमा कम्पनीको खुद नाफा रू. १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । १० करोडभन्दा बढी खुद नाफा कमाउनेमा सगरमाथा, एनएलजी, आईएमई जनरल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि रहेका छन् । यसैगरी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा पनि १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । यीबाहेकका कम्पनीको नाफा भने रू. १० करोडभन्दा तल रहेको छ ।